केटाको अभाव भएपछि सुन्दरीद्वारा सामूहिक विवाहको अपिल ! - Everest Dainik - News from Nepal
केटाको अभाव भएपछि सुन्दरीद्वारा सामूहिक विवाहको अपिल !
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो कुरा यथार्थ हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियोमा यस्तो समस्या आएको छ, जसले सबैलाई चकित पार्छ ।
समस्या हो– विवाहका लागि केटा नपाउनू ! उमेर ढल्किँदै गइसक्यो तर बिहेका लागि एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरु अहिले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै हार–गुहार गरिरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस रुस र ब्रिटेनलाई पछि पार्दै संसारकै दोस्रो प्रभावित देश बन्यो ब्राजिल
याे पनि पढ्नुस ब्राजिलमा एकै दिन ६०० भन्दा बढीको मृत्यु
याे पनि पढ्नुस यात्रु बस बन्धक बनाउने व्यक्तिको प्रहरी कारवाहीमा मृत्यु
ट्याग्स: नोइभा डो कोर्डेरियो, ब्राजिल, सामूहिक विवाह